NFT: Torolàlana feno amin'ny fitadiavana ny 100x manaraka! - Cazoo
Home » Home » NFT: Torolàlana feno amin'ny fitadiavana ny 100x manaraka!
tenifototra: andian-tsoratra Chain, Apes Yacht Club, cryptopunks, ERC-20, ERC-721, NFT, fahita firy, Fifampitokisana, VeeFriends
Fotoana famakiana: 12 minuti
Iza no tsy te hanao x50 na x100 miaraka amin'ny fampiasam-bola NFT?
Na izany aza, lasa saika sarotra kokoa noho ny amin'ny cryptocurrencies, satria misy antony maromaro tsy manam-paharoa mifandraika amin'ny tontolon'ny NFT izay tsy hita amin'ny fananana hafa. Na izany aza, andeha hojerentsika anio ny fomba ahafahanao mahazo ireo vatosoa tsy fahita firy ireo alohan'ny olon-drehetra.
Nolazainay teto amin'ny cazoo ve fa tsy mpanolotsaina ara-bola aho, ary tsy manana qualification aho hanome torohevitra na amin'iza na amin'iza momba ny fampiasana ny volany? Eny, averiko indray. Vakio ireto andalana ireto ho antontan-taratasy fanabeazana NFT, tsy misy hafa. Tena mampidi-doza tokoa ny fampiasam-bola.
Andeha hojerentsika ny fomba hahitana NFT tsy fahita firy.
Manaraha lisitra fanamarinana
Lisitra 1: And
Lisitra # 2: Inona no tadiavina amin'ny NFT: tsy fahita firy
Lisitra 3: Ny Ekipa Mpanorina
Lisitra 4: Ny Tondrozotra
Lisitra no. 5: fiaraha-monina
Lisitra no. 6: Metrika ara-barotra amin'ny blockchain
Tamin'ny Septambra 2021, nanao lavanty ny Sotheby's ny fanangonana karazana gidro 107, antsoina hoe "101 Bored Ape Yacht Club", ary namidiny tamin'ny vidiny adala mitentina 24 tapitrisa dolara. Inona no mahatonga ny rajako leo ho tena sarobidy? Mendrika hodinihina izany satria ohatra tena tsara amin'ny tokony hotandremana tsara rehefa mikaroka ny harato ianao mba hahitana tetikasa NFT efa vonona ny hipoaka.
Andeha hojerentsika ny fanangonana rajako Bored manaraka ny fitsipika fototra 6 izay tadidiko rehefa manao fikarohana momba ny NFT.
Ny ekipa developer.
Na araka ny tiako iantsoana azy, ny ATsRCMt, izay mikoriana tsara amin'ny lela.
Ireo no toetra notadiaviko isaky ny mianatra fanangonana NFT vaovao na fanangonana NFT efa fantatra aza. Karoka ihany koa ireo lafiny ireo, fototra izy ireo, ary tadidio foana fa toy ny ao amin'ny tontolon'ny crypto dia tsy misy na inona na inona manome antoka anao. Manaova fikarohana foana alohan'ny hitiavanao ny fanangonana farany niseho tao amin'ny fahanao Twitter.
Raha raisina ho ohatra ny fanangonana rajako Bored, ireo fitsipika 5 ireo dia raisina tanteraka.
Amin'ny lafiny ara-javakanto dia tsy araka izay antenainao ho hita amin'ny asa kanto ireo rajako ireo, fa tsy Monet, tsy Picasso, fa mbola mampiseho ny toetrany sy ny toetrany ary ny toetrany saro-takarina sy ravaka ary tena izy.
Ity fanangonana zavatra 10.000 ity dia manana toetra tsy miova 170 mahery izay nofantenana sy nomena ny gidro NFT tsirairay rehefa noforonina ny fanangonana tamin'ny fiandohan'ny taona 2021.
Ohatra, ny sasany amin'ireo avatar gidro ireo dia manana solomaso na sofina bunny, ny hafa manana volony leoparda na avana, ny sasany mifoka sigara sy mihinana pizza na mitifitra taratra laser amin'ny masony mihitsy aza. Ny tantely hafa dia manana sigara mihantona eo amin'ny vavany na ny maso mena amin'ny olona voatora-bato lalina. Fa hoy aho hoe, ireo ve no zavatra mamorona sangan'asa? Ny foto-kevitra dia izao: afaka manaiky isika rehetra fa ny zava-kanto dia zavatra tsy dia misy dikany loatra, fa ao amin'ny tontolon'ny NFT dia misy endri-javakanto hita ao amin'ireo fanangonana izay manana endri-javatra tsy fahita firy sy toetra tany am-boalohany.
Izany dia noho ny zava-misy fa ny fanangonana miaraka amin'ny entana be dia be sy ny kalitao ambany amin'ny toetra tsy manam-paharoa noforonin'ny AI dia hiady amin'ny famokarana singa tokana manana toetra miavaka. Ara-matematika dia fampitoviana tsotra izany: fanangonana singa 20.000 nefa tsy misy afa-tsy 20 tsy manam-paharoa, dia ahitana singa maro izay mitovy toetra na indraindray mitovy, ka mampihena ny mety hisian'ny zavatra tsy fahita firy ao anatin'io fanangonana io ary mametra ny fahafahany. ny miteraka tsy fahampiana.
Araka ny efa noeritreretinao angamba, raha ny momba ny fanangonana sary avo lenta amin'ny mombamomba azy, antsoina koa hoe PFP (fanafohezana ny hoe Photo for Profile, aka sary mombamomba azy), tena ilaina tokoa ny tsy fahita firy.
Mazava ho azy fa rehefa mieritreritra ny tsy fahita firy eo amin'ny sehatry ny zavakanto nentim-paharazana isika dia mieritreritra ny Van Gogh Starry Sky. Fa ny NFTs dia nitondra ny foto-kevitry ny tsy fahita firy ho amin'ny ambaratonga vaovao. Ao amin'ny tontolo virtoaly misy marika tsy azo ampiasaina, ny tsy fahita firy dia tsy voatery ho fananana hita ao anatin'ny sangan'asa amin'ny fomba nentim-paharazana amin'ny teny.
Azo antoka fa misy mpanakanto manangom-bokatra izay manana fomba ara-javakanto voafaritra tsara: iray ambonin'ny zava-drehetra, ny fanangonana Fidenza nataon'i Tyler Hobbs.
Trust nataon'i Tyler Hobbes
Fidenza no hevitr'i Tyler Hobbs, 34 taona, izay niala tamin'ny asany amin'ny maha-injeniera informatika azy mba hiasa amin'ny maha-mpanakanto manontolo andro azy. Nanomboka nanao ETH izy rehefa fantany Art Blocks, sehatra kanto mamorona NFT mifototra amin'ny zavakanto miteraka, ary lasa mpanakanto voarindra.
Ny ankamaroan'ireo fanangonana PFP ao amin'ny Openea izay lamaody ankehitriny dia tsy ara-javakanto mihitsy.
Azo atao ny manao fampitahana sy mandinika ireo avatar NFT tena sarobidy ireo ary koa karatra azo angonina avy amin'ny rakikira baseball na rakikira baolina kitra Panini. Mitovy amin'ny fahitantsika ny tsy fahita firy amin'ireo karatra varotra tsy manam-paharoa ireo, ny NFT tsirairay ao anatin'ny fanangonana manokana dia heverina ho tsy fahita firy ary noho izany dia sarobidy kokoa noho ny hafa. Fa nahoana? Matetika izany dia noho ny toetra tsy manam-paharoa na fananana tena izy izay ananany ihany ary voasoratra ao amin'ny blockchain. Ohatra sasany? Mason'ny laser ho an'ny rajako Bored, punks vahiny ho an'ny Cryptopunk, tarehy amin'ny fahitalavitra ho an'ny Cool Cats na Gen 0 saka ho an'ny Cryptokitties.
Cazoo, andao hidina amin'ny raharaham-barotra! Ahoana no ahafahana mahita sy mahazo ny tsy fahita firy amin'ny fiatoana NFT ho avy?
Maro ny mpanangona no mety hanaiky ahy fa ny Ny fahitan'ny NFT mbola mijanona ho iray amin'ireo endri-javatra sarotra indrindra ho fantatra amin'ny fanangonana rehetra, indrindra raha vaovao izany, fa satria ny NFT rehetra dia voatahiry sy tantana ao amin'ny blockchain ... tianao ny tsy hisy fitaovana ahafahantsika mahazo fahatakarana bebe kokoa momba ny ny toetran'ny fanangonana jerentsika?
Ny iray amin'ireo fitaovana ampiasaina indrindra dia rarity.tools, tranonkala iray natokana tanteraka hanasokajiana ny kanto miteraka sy ny fanangonana NFT mifototra amin'ny tsy fahita firy, noho izany ny anarany. rarity.tools dia manome topimaso momba ireo toetra sy toetra ao anatina fanangonana manokana ary ahafahan'ny tompon'ny fananana hanamarina ny tsy fahitan'ny NFT tsirairay avy.
Saingy tsy vitan'ny! Nahavita naoty isa tsirairay izy ireo (samy endri-javatra, ny toetra miavaka rehetra) amin'ny NFT tsirairay, ary nantsoiny hoe ny isa tsy fahita firy. Ny isa tsy fahita firy ho an'ny toetra rehetra amin'io NFT io dia ampiarahina mba hamokarana izay metrika tsy fahita firy amin'ny NFT dinihina. Tena marani-tsaina… indro misy famintinana haingana ny fomba fiasa: satria mamaritra ny isa tsy fahita firy amin'ny toetra manokana iray, ny sehatra dia maka ny isan'ny toetra raisina, amin'ity tranga ity dia iray ihany, mizara azy amin'ny fitambaran'ny zavatra manana izany toetra izany ary avy eo mizara azy indray amin'ny isan'ny zavatra ao amin'ny fanangonana . Ity raikipohy tsotra ity dia miteraka ny isa tsy fahita firy amin'io toetra manokana io ary mba hahazoana isa tsy fahita firy amin'ny NFT noheverinay, rarity.tools dia manampy fotsiny ny naotin'ny toetra tsirairay.
Ohatra iray amin'ny isa tsy fahita firy an'ny rajako Bored
Mbola manana endri-javatra mahafinaritra ilay sehatra: manome u ny mpampiasan kalandrie manoritra ny fitetezana NFT rehetra ho avy, tena mety ny ho haingana kokoa noho ny hafa ary hijery ireo tetikasa NFT izay hojerena tsy ho ela. Na izany aza, tokony ho tsaroana fa tsy maintsy tandremana foana ny fiheverana lehibe: amin'ny toe-javatra misy ankehitriny dia misy tetikasa vaovao am-polony isan-kerinandro ary ny tolotra eny an-tsena dia mitombo hatrany amin'ny tahan'ny tsy maharitra. Ny ampahany kely amin'ireo fanangonana natomboka tamin'ny 2021 ihany no tafita velona tamin'ny fotoana maharitra .. ny isan-jato lehibe indrindra dia ny NFT izay lasa aotra. Ary ny tiako holazaina dia ZERO. Tandremo mandrakariva izany.
Fomba iray hafa tsara hamakiana ny tsy fahitan'ny collectible dia ny famakafakana ny metrika ao amin'ny fizarana Openea Properties.
Ny fananana NFT amin'ny Openea
Eto ho an'ny fanangonana tsirairay voatanisa eo amin'ny tsenany, ny Openea dia hanoritra ny fiverimberenan'ny toetra tsy fahita firy amin'ny NFT ao anatin'ny fanangonana azy. Izany indrindra dia ahafahan'ny mpividy mety handrefesana ny tsy fahitan'ny mpanangona zavatra mahaliana azy nefa tsy mila mandalo fanadihadiana lalina sy fikarohana tsy misy farany.
Ny tena ifantohana eto dia ny fanamorana ny tsy fahampian'ny famakiam-boky - toy ny fijerena ny fananan'ny mpilalao baolina kitra ao amin'ny Fifa.
Rehefa mitady zavatra tsy fahita firy ao anatin'ny fanangonana manokana ianao dia te-hikaroka ireo NFT izay manana fananana tsy manam-paharoa sy tsy fahita firy, satria ho raisina ho sarobidy indrindra. Marina ve? Eny. Rehefa mitady an'io NFT amin'ny ho avy io ianao dia tsy maintsy ho iray amin'ireo tanjonao voalohany ny tsy fahita firy.
Ny dingana manaraka amin'ny lisitry ny fanamarinana ahy rehefa mikaroka tetikasa iray dia ny fandinihana tsara ny ekipa mpanorina.
Tsy dia tsotra toy ny hoe hiverenana hoe iza no ao ambadiky ny tetikasa iray, satria misy mpanorina ny tetikasa malaza toy ny Bored Ape Yacht Club, ohatra, dia mbola mangina ihany raha ny tena maha izy azy. .
Na dia heverina ho saina mena tanteraka amin'ny tontolon'ny crypto aza ny tsy mitonona anarana, ny Bored Ape Yacht Club dia tena miavaka amin'ny fitsipika satria na dia teo aza ny tsy nitononany dia nahavita namorona angamba ny iray amin'ireo marika NFT malaza sy be mpanaraka indrindra ny ekipa.
Ny ekipa mpanorina dia afaka miteniteny foana momba ny maha-izy azy, ny anjara andraikiny amin'ny fampandrosoana ny tetikasa ary ny traikefany amin'ny asa samihafa. Iray amin'ireo ohatra mety indrindra ny VeeFriends, tetikasa NFT naorina sy tarihin'ilay mpandraharaha malaza iraisam-pirenena Gary Vaynerchuk, fantatra amin'ny anarana hoe Gary Vee. Ny fahafahana mampifandray tetikasa amina mpanorina (na vondrona mpanorina) fanta-daza dia mampitombo ny fahatokisan-tena amin'ny tetikasa, ary manome fahatokisana ny tompon'ny NFT amin'io fanangonana io momba ny fampiasam-bolany. Fanampin'izay, raha efa manana toby mpampiasa sosialy lehibe ny mpanorina ny tetikasa, toy ny tamin'i Gary Vee, dia mety hiakatra ny fahatokisana ny tetikasa NFT. Noho izany, raha azo atao dia mila mijery ny ekipa mpanorina ianao mba hitsara raha hanana hery sy hery hampandrosoana ny tetikasa izy ireo ary misy ny vintana lehibe hanatanterahany ny fampanantenany.
VeeFriends avy amin'i Gary Vaynerchuk
Dingana fahatelo: ny Tondrozotra.
Tahaka ny saika amin'ny tetikasa rehetra ao amin'ny ecosystem token fungible, ny tetikasa non-fungible (NFT) rehetra dia matetika manolotra tondrozotra ho an'ny mpampiasa vola, ary raha amin'ny fomba fijery ara-kevitra dia mizara fitoviana ny tetikasa token azo ampiasaina sy tsy azo ampiasaina, rehefa ireo Raha ny tondrozotran'izy ireo manokana, ny an'ireto farany dia mirona hampiditra endrika ara-javakanto mazava kokoa mba hilazana ny tanjon'ny tetikasa ho avy, ny fiaraha-miasa, ny fidinan'ny rivotra ary ny fampiasana DeFi vao haingana.
Tondrozotra rajako leo, hita maso sy mamorona
Tsy izany foana no zava-misy: talohan'ny nihazakazahan'ny NFT tamin'ny 2021, dia vitsy dia vitsy ny tetikasa NFT nanasongadina tondrozotra: Cryptokittens sy Cryptopunks, natao voalohany tamin'ny 2017, dia nanana tanjona tokana hanandrana ny endrika vaovao ERC-token. 721 amin'ny Ethereum blockchain, tsy tena tetikasa maharitra.
Ny tondrozotra malaza indrindra amin'izao fotoana izao dia ny an'ny Bored Apes Yacht Clubs, ary ny hevitr'izy ireo dia nanome aingam-panahy tetik'asa maro hafa mba hamoronana bebe kokoa hatrany amin'ny fanavaozana ho avy.
Tahaka ny amin'ny tetikasa crypto rehetra, toa an'i Cardano, Polkadot, Solana na Luna, ny famakiana ny tondrozotran'ny tetikasa dia tena zava-dehibe mba hanandramana hamantatra ny fitomboany maharitra sy hijerena ny fivoarana ho avy.
Hatramin'izao, ireo tetikasa izay nahazo ny fitomboana parabolika lehibe indrindra dia ireo izay nanome ny tompon'ny NFT (ireo mpihazona, amin'ny teny jargon) miaraka amin'ny sanda fanampiny, tsy tapaka, hatramin'ny andro voalohany. Inona avy ireo soatoavina fanampiny ireo? Ireo dia mety ho fiaramanidina NFT maimaim-poana mivantana ao amin'ny kitapom-bolan'ny tompona, airdops famantarana ERC-20, tetikasa staking NFT hamokatra vola miditra, "tombontsoa ho mpikambana", fidirana alohan'ny hafa amin'ny fandefasana NFT hafa, fidirana manokana amin'ny Launchpads sasany, ary na dia ny fidirana manokana aza. mankany amin'ny fivarotany entam-barotra.
Ireo angamba no sasany amin'ireo endri-javatra "irina" kokoa hotadiavina ao anatin'ny sori-dalan'ny tetikasa, saingy tsy lazaina intsony fa mandra-panehoan'ny ekipan'ny fampandrosoana fa mampihatra ny zavatra nampanantenainy izy ireo, ny sori-dalana dia tsy hafa, raha ny marina. , fampanantenana. Mitandrema, mitandrema hatrany, indrindra raha vao noforonina ny tetikasa resahina ary eo am-piandohan'ny fivoarany.
Izany hoe raha ny tetikasa NFT izay ezahinao hidirana dia mampiseho endrika kanto mahaliana sy tena izy, raha toa ka manana endri-javatra tsy manam-paharoa ilaina hamokatra tsy fahita firy, ary mampiseho famantarana mazava momba ny ekipa mpanorina matanjaka manome lanja ny fiarahamoniny. ary koa ny sori-dalana, dia lehibe lavitra noho ny tetikasa izay tsy manana ny fepetra voalaza etsy ambony ny mety hisian'izany tetikasa izany amin'ny fotoana maharitra.
Maro no milaza fa ity dingana manaraka ity no mety indrindra amin'ny rehetra: fiaraha-monina.
Izaho manokana dia tsy resy lahatra tanteraka fa ny sandan'ny fanangonana NFT dia miankina tanteraka amin'ny fiaraha-monina misy azy, na izany aza dia ekeko fa tsy isalasalana fa manana anjara toerana lehibe izy io na eo amin'ny famoronana ny tetikasa na amin'ny fivoarany mitohy.
Ny fomba mahomby indrindra hitako hahazoana fahatakarana bebe kokoa momba ny herin'ny vondrom-piarahamonin'ny tetikasa dia ny mifandray mavitrika amin'ireo fantsona ofisialin'ny tetikasa, indrindra amin'ny alàlan'ny media sosialy, toy ny Twitter, Telegram, Instagram na mety ho Discord. .
Rehefa mahita fanangonana voalohany ao amin'ny Openea na tsena NFT hafa ianao, ny fivoarana voajanahary indrindra avy any dia ny mijery ny ambaratonga manaraka sy ny firotsahany ao amin'ny Twitter sy Discord. Izany dia noho ny antony roa: voalohany satria mbola zaza ao anatin'ny tsingerin'ny fiainan'ny NFT isika ary mbola tsy namolavola tanteraka ny tontolo iainany izy ireo ka afaka mampiakatra ny volan'ny varotra avy amin'ny rafitra ara-bola, ohatra amin'ny fampiasana fampindramam-bola sy fiantohana ny vola. fananana. , ary faharoa satria, mba hampahomby ny tetikasa NFT amin'ny fomba fijery fampiasam-bola, ny fiaraha-monina ara-tsosialy goavana, manolo-tena ary mavitrika dia ho lasa tsena hivarotana ny tenany manokana. Ankoatr'izay, noho ny fananany raiki-tampisaka amin'ny maha-zava-kanto azy, dia mbola mijanona ho biby ara-tsosialy ny NFT, ary tsy maintsy miroborobo indrindra amin'ny fifantohan'ny media sosialy.
Vokatr'izany, raha mahita kaonty Twitter momba ny tetikasa iray mitombo tsy azo ihodivirana ao anatin'ny herinandro vitsivitsy ianao, dia azo inoana fa ny mpanangona dia hampitombo ny finoana fa ho lasa lavitra io tetikasa manokana io, ary azo inoana fa ny fangatahana NFT ao anatin'izany. mety hitombo ny fanangonana manokana.
Ankoatra ny metrikan'ny media sosialy, mety ho mendrika ihany koa ny mijery ny fihetsiky ny vondrom-piarahamonina sy ny fifandraisany amin'ny Twitter sy Discord, ohatra raha mandeha foana ny chat ary tsy matory mihitsy dia mety ho mariky ny tanjaka. Ataovy azo antoka fa tsy voafehy ny masonao rehefa mitsoraka ao amin'ny Discord an'ny tetikasa iray.
Amin'ny alàlan'ny famakafakana fotsiny ny metrika media sosialy amin'ny tetikasa vaovao iray dia afaka mahazo hevitra feno momba ny fitakian'ny NFT amin'ny ho avy izay ho azon'io tetikasa io: matetika dia tetika mandresy izany rehefa mampiasa vola amin'ny NFT mandritra ny famokarana azy ireo, ny famoronana azy ireo, satria amin'ny Ity vidin'ny dingana ity dia manodidina ny 0,05 ETH sy 0,08 ETH izay natao ara-teknika ho vidiny ambany indrindra.
Ny fividianana NFT amin'ny fanodinana azy, noho izany ny famoronana azy, dia dingana mitovy amin'ny fandraisana anjara amin'ny ICO, ny fanolorana vola madinika voalohany, ary amin'ny ankapobeny ny tombony dia mihoatra ny fatiantoka: mividy NFT amin'ny "vidin'ny gorodona" amin'ny fanontana azy, avy amin'ny fanangonana izay dia nahazo tombontsoa lehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina, ary mety hiteraka fitakiana fanampiny ho an'ny NFT an'io tetikasa io eo amin'ny tsena faharoa ihany koa.
Na izany aza, tsy maintsy milaza aho fa ny fividianana ny NFT amin'ny milina dia tena mifaninana, ka eto koa dia tsy maintsy mandroso amim-pitandremana: ny vidin'ny entona, ny komisiona, dia mety ho avo ary tsy misy antoka ny fahazoana izany NFT.
Tonga amin'ny dingana farany amin'ny lisitry ny lisitry ny lisitray izahay, angamba ny ampahany mahaliana indrindra: ny metrika ara-barotra.
Taorian'ny fanatsoahan-kevitra mitombina momba ny sori-dalan'ny ekipa artista, ny tetikasa ary ny fiarahamonina mifandray aminy, ny singa farany tokony hodinihina dia ny fifanakalozana, ny varotra, ny metrika an'io fanangonana io ao anatin'ny blockchain. Tsy azoko atao ny manantitrantitra tsara ny maha-zava-dehibe an'io teboka io satria ny metrika ao anatin'ny blockchain dia ahafahana mamaritra tsara ny fifandraisana misy eo amin'ny famatsiana sy ny tinady ao anatin'ny fanangonana manokana ary mamela ny hamantatra ny tsy fahitan'ny NFt amin'ny lafiny iray. mifanohitra amin'ny zavakanto fotsiny.
Ity fomba ity dia mazava ho azy fa mahomby kokoa ho an'ireo fanangonana NFT izay manana angon-drakitra fifanakalozana betsaka amin'ny blockchain, satria ny hany azontsika anadihadiana dia ny tantaran'ny fifanakalozana sy ny isan'ny tompon'andraikitra.
Soso-kevitra voalohany indrindra: rehefa nahita fanangonana mamaly tsara ny fanamarinana rehetra nolazaiko ianao dia te-hanamarina fa ny isan'ny NFT ao amin'io fanangonana io dia mifandanja sy mifandanja amin'ny fitambaran'ny fananana ao anatin'ilay fanangonana. Izany hoe, raha 10.000 NFT ny fitambaran'ny famatsiana iray ary misy 5.000 ny tompony, dia ao anatin'ny toe-javatra salama sy tsara indrindra isika, satria ny salan'isa famatsiana / fitazonana dia NFT roa isaky ny tompon-trano. Na izany aza, raha misy, ohatra, zavatra 10.000 ao anaty fanangonana nefa zaraina amin'ny tompony 500, ny tahan'ny tolotra sy ny salan'isa dia 20 NFT isaky ny tompon-trano. Amin'ny matematika dia mamaky tsy fifandanjana mafy eo amin'ny fifandraisan'ny tolotra sy ny fangatahana isika.
Amin'ity toe-javatra eritreretina ity, ireo mpihazona manana NFT 20 na mihoatra dia afaka manondraka mora foana ny tsena amin'ny fivarotana ny sombiny, ka mahatonga ny vidin'ny lavanty fototra ho an'ny NFT ao amin'ny fanangonana (vidin'ny gorodona). Ny lalànan'ny famatsiana sy ny fangatahana dia tsy maintsy atao ao an-tsaina foana satria mihatra amin'ny tsenan'ny NFT angamba mihoatra ny zavatra hafa. Inona ary no tokony hotadiavintsika? Tadiavo ireo fanangonana izay manisy marika ny boaty rehetra ao amin'ny lisitray izay manana ny tolo-bidy NFT ambany indrindra ary ny isan'ny tompony sy mpividy be indrindra. Raha atambatra, ireo metrika ireo dia manoritsoritra tsara ny famatsiana faran'izay tsara indrindra sy ny scenario fitakiana be dia be izay mamela ny famoriam-bola hihazona tsy miovaova raha tsy mitombo ny vidiny fototra.
Ry zalahy, ny NFT amin'ny ankapobeny dia mahagaga sy mahavariana, saingy mbola betsaka ny tokony hianarana ... ny tsenan'ny NFT amin'ny ankapobeny dia namokatra 100x sy 200x maromaro tamin'ny taona 2021 fotsiny, ary azoko antoka fa hanohy ny fampanantenany izy ireo. ireo mpandray voalohany amin'ny volana. Ny fitomboana haingana ny isan'ny fanangonana vaovao mivoaka isan'andro dia mahatonga ahy hieritreritra fa ny tsena sy ny filan'ny NFTs dia mety ho tony kely ato ho ato, fa mandritra izany fotoana izany raha afaka mahita NFT tena tsara ianao. izay tena tianao hananana .. ho fantatrao tsara ny tokony hatao sy ny tokony hotadiavina ary ny dingana arahina.
4.0 amin'ny 5 kintana(29)
€ 59,99 (tamin'ny 30/06/2022 19:59 GMT +00: 00 - Fampahalalana hafaAry mety misy fiovana. Ny fampahalalana rehetra momba io lohahevitra io dia hita ao amin'ny Amazon.com, azo ampiharina amin'ny fotoana fividianana.)
Compo Duaxo Vonona hampiasaina, Fungicide Multipurpose, ho fiarovana ny zava-maniry haingon-trano ho an'ny trano sy zaridaina, 750 Ml & zezika Rose, ho an'ny felam-boninkazo mahery vaika sy ny fitomboan'ny kirihitra, 1 L
4.5 amin'ny 5 kintana(6932)
Einhell Garden Pump GC-GP 6538 (650 W, tsindry 3,6 bar, tahan'ny fikorianan'ny rano 3.800 l / h, visy famenoana rano, visy tatatra rano, fitondra mitondra)
4.3 amin'ny 5 kintana(5640)
€ 58,89 (tamin'ny 01/07/2022 18:42 GMT +00: 00 - Fampahalalana hafaAry mety misy fiovana. Ny fampahalalana rehetra momba io lohahevitra io dia hita ao amin'ny Amazon.com, azo ampiharina amin'ny fotoana fividianana.)
CONOPU OZW21P02B, Racket moka elektrika 3-in-1
4.2 amin'ny 5 kintana(754)
€ 25,99 (tamin'ny 01/07/2022 18:42 GMT +00: 00 - Fampahalalana hafaAry mety misy fiovana. Ny fampahalalana rehetra momba io lohahevitra io dia hita ao amin'ny Amazon.com, azo ampiharina amin'ny fotoana fividianana.)
4.2 amin'ny 5 kintana(17961)
€ 159,90 (tamin'ny 01/07/2022 18:42 GMT +00: 00 - Fampahalalana hafaAry mety misy fiovana. Ny fampahalalana rehetra momba io lohahevitra io dia hita ao amin'ny Amazon.com, azo ampiharina amin'ny fotoana fividianana.)
4.5 amin'ny 5 kintana(1334)
€ 15,00 (tamin'ny 01/07/2022 18:42 GMT +00: 00 - Fampahalalana hafaAry mety misy fiovana. Ny fampahalalana rehetra momba io lohahevitra io dia hita ao amin'ny Amazon.com, azo ampiharina amin'ny fotoana fividianana.)
Lahatsoratra talohaTatitra NFT: 2021 dia taonan'ny fitomboana lehibe
Lahatsoratra manarakaNy metrika hodinihina amin'ny fividianana sy fivarotana NFT